Maraykanka oo Hanjabaad u diray dowladaha Caalamka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka oo Hanjabaad u diray dowladaha Caalamka.
On Dec 21, 2017 203 0
Iyadoo dhawaan kulan uu yeeshay golaha Amaanka looga soo horjeestay go’aankii uu Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada AL-Qudus caasimad ay leeyihiin Yahuudda ayaa dowladda Maraykanka waxay dirtay hanjabaad culus.
Cod bixin ka dhan ah qaraarka Trump ayaa la filayaa dhawaan in laga sameeyo Qaramada Midoobay, waxaana haweeneyda Maraykanka u fadhisa Qaramada Midoobay ay sheegtay iney diiwaangelin doonaan dowladaha marka ay cod bixintu socoto ka horyimaada go’aanka Donald Trump.
Donald Trump qudhiisa oo warbaahinta Aqalka cad la hadlay ayaa sheegay in lacagaha ay siiyaan dowladaha caalamka ay ka joojin doonaan, haddii ay ka horyimaadaan go’aankiisa.
“Dowladaha waxay naga qaataan malaayiin doollar ama balaayiin doollar, hadana inaga ayay naga hor imaanayaan, hagaag, codbixintaas waan la soconaa, iska dhaaf ha bixiyana cod bixin naga soo horjeeda” ayuu yiri Donald Trump.
Arintan ayaa muujineysa sida dowladda Maraykanka ugu fashilantahay waxa loogu yeero Diblumaasiyadda, waxaana muuqaneysa in dowlado madaxbanaan sida la sheego maalin cad loo hanjabo.